ဒေးဗစ်လားနဲ့ ဦးဝေထွန်းတို့ကို ထောင်သုံးလစီ အမိန့်ချ
တရားဟောဆရာ စောဒေးဗစ်လားကို ၂၀၂၀၊ မေ ၂၀ ရက်နေ့က မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားရုံးမှာ တွေ့ရစဉ်
ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာ စောဒေးဗစ်လားနဲ့ ဦးဝေထွန်း တို့ကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ-၃၀(က)အရ အလုပ်နဲ့ ထောင်ဒဏ် သုံးလကျခံစေဖို့ ဒီကနေ့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ နှစ်ဦးကို ကနဦးက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ နဲ့ တရားစွဲဆိုခဲ့ပေမယ့် နှစ်ဖက်ရှေ့နေတွေရဲ့ လျှောက်လဲကြားနာချက်အရ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ-၃၀(က)နဲ့ တရားရုံးကပုဒ်မ ပြောင်းလဲအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်တားဆီးရေးစည်းကမ်းတွေ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကာလအတွင်း လူစုလူဝေးနဲ့ တရားပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့မှုနဲ့ သူတို့နှစ်ဦးကို အများဆုံးထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်တဲ့ပုဒ်မနဲ့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားရုံးမှာ မေလ ၂ဝ ရက်နေ့က စတင်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုချမှတ်လိုက်တဲ့ ထောင်ဒဏ်သုံးလမှာ ချုပ်ရက်ကို ထုတ်နုတ်ခံစားခွင့်ပြုတာကြောင့် သူတို့ နှစ်ဦးဟာ လာမယ့်သီတင်းနှစ်ပတ်အတွင်း ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာမှာပါ။
အမှုမှာ တရားလိုပြသက်သေအနေနဲ့ အဆိုတော် မျိုးကြီးအပါအဝင် လူပုဂ္ဂိုလ် (၁၂) ဦးတို့ကိုစစ်ဆေး ခဲ့ပြီး စွပ်စွဲခံရသူဘက်မှ ပြန်ခေါ်သက်သေ (၆)ဦးကိုလည်း စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အယောက် ၂၀ ထပ်သေဆုံး
Very different from U Phyo Min Thein and Saw David Lah . U Phyo Min Thein is the Yangon Prime Minister . He is sitting above the law.
Aug 08, 2020 02:52 AM